Sequel in Nepali film industry
Topic: Sequel in Nepali film industry
Author Topic: Sequel in Nepali film industry (Read 5570 times)
« on: February 22, 2015, 12:38:47 PM »
Credit - Anand Nepal (writer in http://xnepali.net/movies)
- Himmat and Himmat2are two sequels of the past
- Aago and Aago 2
- Not sequel but, two version of Santan and two version of 'Chino', two versions of 'Kusume Rumal', two versions of 'Aama' were also released in Nepali film industry.
Upcoming sequel movies (and links to watch the previous sequels)
Jholey2(watch ‘Jholey’ here)
Bindaas3(Watch ‘Bindaas 1′ and Watch ‘Bindaas 2′ here)
Bato Muniko Phool2(watch ‘Bato Muniko Phool’)
Loot2(not officially announced, but likely to be announced. Watch ‘Loot’ here.)
Nai Na Bahnnu La3(shooting complete, next sequel possible. Watch Nai Nabhannu La2here and ‘Nai Nabhannu La’ here.)
Kabaddi2(Watch ‘Kabaddi’ here)
Kismat2(watch ‘Kismat’ here)
Re: Sequel in Nepali film industry
« Reply #1 on: February 22, 2015, 12:40:03 PM »
सौगातलाई समाउँदै कबड्डी कबड्डी निर्माण घोषणा
खोक्ने देखि बोक्ने सवै दोहोरिने
यहि बर्षको हिट फिल्म कबड्डीको सिक्वेल निर्माण घोषणा गरिएको छ ।
कबड्डी फिल्ममा खोक्ने देखि लिएर मैयालाई बोक्ने सम्मका सवै कलाकारहरु दोर्‍याउँदै उक्त यूनिटले कबड्डीको सिक्वेल कबड्डी कबड्डी घोषणा गरेको हो ।
रामबाबु गुरुङ्ग निर्देशित कबड्डी गाउँले परिवेशको फिल्म थियो जसलाई दर्शकले अत्याधिक रुचाएका थिए । फागुन २५ देखि सुटिङ सुरु गर्ने लक्ष्य सहित यूनिटले फिल्म निर्माणको घोषणा आज गरेको हो ।
दिईएको जानकारी अनुसार कबड्डी कबड्डीमा दयाहाङ राईका नजिकका दोष्त सौगात मल्ल पनि मुख्य भूमिकामा हुनेछन् । प्रेम र राजनीतिको भीडन्तलाई मुख्य कथा बनाएर कबड्डी कबड्डीको स्क्रिप्ट तयार गरिएको यूनिटको भनाई छ ।
प्राय सवै काष्ट एण्ड क्रु दोहोरिने बताईएपनि मुख्य छायाँकार पुरुषोत्तम प्रधानको समय नमिलेपछि यो सिक्वेललाई शैलेन्द्र ध्वज कार्कीले खिच्ने छन् । कबड्डी कबड्डीमा ९५ प्रतिशत दृश्य मुस्ताङको हुने बताईएको छ ।
from - newsfilmy.com
कबड्डीको सिक्वेल कबड्डी कबड्डी , के के फरक हुनेछ ?
फागुन ९ , कलिउड अपडेट ।
हिट चलचित्र कबड्डीको सिक्वेल चलचित्र कबड्डी निर्माण हुने भएको छ । यो चललचित्र फागुन २५ देखि फ्लोरमा जाने छ । करिव ९५ प्रतिशत मुस्ताङमा छायांकन हुने यो चलचित्र कबड्डीमा काजिको प्रेमले निरन्तरता पाउने छ ।
कबड्डी र कबड्डि कबड्डिमा के के फरक हुनेछ त ?
पात्र , स्थान , मायाप्रेम लडाइ झगडा , नौरीकोट गाउँ , थकालि समाज , बिरकाजि , मैया , एकोहोरो प्रेम , एकोहोरो उपेक्षा सवै उस्तै हुने छ तर भोटको राजनिति संगै शहरबाट एउटा नयाँ अनुहार गाउ प्रवेश गर्ने छ । उसको नाम हुनेछ बमकाजि । पहिलो कबड्डिमा प्रेमले सिमा नाघेको थियो भने यस पटक प्रेममा जवरजस्ति राजनिति पनि घुसेको छ । पहिले बदला लिन शहरबाट भिलेन आएको थियो भने यस पटक शहरबाट बंशभित्रै बाट भिलेन आइ पुग्दा काजिको पारो तात्ने छ । कबड्डिको सिक्वेलमा यस पटक सौगात मल्लको पनि इन्ट्रि हुने छ , बमकाजिको रुपमा ।
चलचित्रलाइ रामबाबु गुरुङले निर्देशन गर्नेछन् भने कार्यकारी निर्माता निश्चल बस्नेत हुन् । चलचित्रको कथा पटकथा संवाद रामबाबु गुरुङ र उपेन्द्र सुव्बा को रहेको छ । चलचित्रका निर्माताहरु सुनिल चन्द रौनियार र रौनक बिक्रम कँडेल हुन् । यसैगरी कबड्डि कबड्डिका सहनिर्माता ओम चन्द रौनियार र अर्जुन कार्कि हुन् । चलचित्रका गितमा रोहित शाक्यको रहने छ भने द्धन्द कुमार महर्जनले गर्ने भएका छन् ।
चलचित्रमा दयाहाङ राइ , सौगात मल्ल , निश्मा गुरुङ , बिजय बराल , बुद्धि गुरुङ , कमलमणि नेपाल लगायतका कलाकारको अभिनय रहने छ ।
« Reply #2 on: February 24, 2015, 12:54:42 AM »
`बाटो मुनिको फूल २` शुरू
चर्चित फिल्म `बाटो मुनिको फूल`को सिक्वेलको छायांकन शुरू गरिएको छ । झापाका विभिन्न रमणिय स्थानमा यो फिल्मको छायांकन गरिनेछ । ९० प्रतिशत छायांकन झापामै गरेर यसको यूनिट काठमाण्डौ फर्कनेछ ।
फिल्मलाई सुवर्ण थापाले निर्देशन गर्दैछन् । फिल्मको निर्माण यश कुमारले गर्न लागेका हुन् । यो फिल्ममा बाबु बोगटी, यश कुमार, दिलिप रायमाझी, ऋचा शर्मा, अशिष्मा नकर्मी, रिमा विश्वकर्मा, गणेश उप्रेती, सुभद्रा अधिकारी, टिका पहाडी लगायतका कलाकारको अभिनय रहनेछ ।
फिल्ममा मानकृष्ण नकर्मीको छायांकन, यश कुमार र बाबु बोगटीको संगीत, चन्द्र पन्तको द्धन्द्ध, गोविन्द प्रभातको नृत्य रहने छ । 'बाटो मुनिको फूल २'मा पहिलो फिल्ममा नखुलेका बिषयलाई उठान गरिने यश कुमारले जानकारी दिए ।
« Reply #3 on: March 24, 2015, 01:21:09 AM »
Silsila Sequel announced
watch Silsila here --> http://xnepali.net/movies/nepali-movie-silsila/
« Reply #4 on: December 21, 2015, 08:20:32 AM »
फिल्म : कबड्डी कबड्डी
कलाकार : दयाहाङ राई, सौगात मल्ल, रिश्मा गुरुङ, बिजय बराल, बुद्धि तामाङ, माओत्से गुरुङ, उपेन्द्र सुब्बा, शिशिर बाङदेल, पुष्कर गुरुङ, कविता आले, पशुपति राई, अरुणा कार्की, कमलमणी नेपाल आदी ।
भनिन्छ, युद्ध र प्रेममा हरेक कुरा जायज हुन्छ । विरकाजीले मैयाँलाई कति प्रेम गर्छ, ‘कबड्डी’ मा हेरिसकेका दर्शकका लागि त्यसको सिक्वेल ‘कबड्डी कबड्डी’ मा उसले बिहे गर्ला ? वा फेरि शहरिया केटो आएर भाँजो हाल्ला ? ‘कबड्डी कबड्डी’ को कथानक रोचकता यसैको सेरोफेरोमा घुमेको छ ।
‘कबड्डी’ शहरिया दर्शकका लागि ‘सरप्राइज प्याकेज’ का रुपमा आइदियो । पटकथामा रहेका केही कमजोरीका बाबजुद पनि फिल्मको स्वादलाई अर्गानिक मानिदिए दर्शकले । खुराक नै स्वास्थ्यकर भयो भने कहिलेकाहीं पकाईको कमजोरी गौण रहन्छ भन्ने ‘कबड्डी’ ले सिद्ध गरिदियो ।
मुस्ताङको नौरीकोटको हिमाली परिवेश र त्यहाँको थकाली समुदाय धेरै दर्शकका लागि ताजा लागेको थियो । मामा चेला र फुपु चेलीबीच बिहे गर्ने थकाली परम्पराभित्र काजीले मामाकी छोरी मैयाँलाई देखाएको झोडी माया थप रुचीकर बन्यो ।
‘कबड्डी’ को सिक्वेलले दर्शक तान्नु जति सजिलो थियो, उस्तै चुनौती सकारात्मक प्रतिक्रिया निकाल्नुमा थियो निर्देशक रामबाबुका लागि । ‘कबड्डी कबड्डी’ ‘सरप्राइज प्याकेज’ भन्दा बढि ‘कन्भिन्सिङ प्याकेज’ हुनु र बनाउनु पर्ने थियो । यसमा पटकथाकार समेत रहेका रामबाबु चुकेनन् । ‘कबड्डी कबड्डी’ आईपुग्दा उनी धेरै परिपक्व देखिएका छन् ।
‘मनी एट्रयाक मनी’ भन्ने बुझेको काजी मैयाँसँगको माया पनि सोझै पाराले सोच्छ । भन्छ, ‘लभ एट्रयाक लभ । त्यो मनले यो मनको कुरो एकदिन कसो नबुझ्ला र ?’ तर काजीको लभको स्क्रिप्ट यति जटिल बनेर आईदिन्छ, जब बमकाजीले इन्ट्री मार्छ । मैयाँ काजीकै जस्तै बमकाजीकी पनि हकदार सोल्टि त हुन् नै, बिहेकै लागि पनि ताक्छ । ‘कबड्डी कबड्डी’ को चुरो कुरा यसैमा छ । उपकथा बनेर देखिने संसदिय चुनाव काजीको प्रेम जाँच्ने कसी बन्छ ।
kabaddi kabaddi review
काजीको प्रेममा बमकाजीको राजनीति त घुसेकै थियो । अब चुनावले राजनीतिमा प्रेम पनि घुसेपछि काजीको धर्मसंकट बढ्छ । एकातर्फ ठूलाबा, अर्कातर्फ मामा उम्मेदवार । ठूलाबातर्फ पार्टीको सैद्धान्तिक समानता, मामातर्फ मैयाँको तूरुप । काजीले सिद्धान्त छोड्ने वा मैयाँ ? प्रेम र युद्धमा हरेक कुरा जायज हुन्छ । काजीले मैयाँ रोज्छ । तर नैरीकोटको कच्ची बाटो अफ्ठ्यारो मात्रै छैन, बांगोटिंगो पनि छ ।
प्राविधिक पक्षमा ‘कबड्डी कबड्डी’ अघिल्लो भन्दा परिस्कृत छ । हिमालको काखमा रहेको गाउँमा खिचिएको फिल्मका दृश्य जस्ताको तस्तै टपक्क टिप्न सफल छन्, छायांकार शैलेन्द्रध्वज कार्की । कथा र चरित्रको मुडको व्याकरणमा खिच्न रुचाउने शैलेन्द्रले धेरै हदसम्म दृश्यलाई न्याय गरेका छन् । पृष्ठभुमि संगीत पनि मुड अनुरुप फिट छ । संवाद छरिता र चोटिला छन् । कमेडी पन्चमा संवाद सबल देखिन्छ ।
अभिनयमा दयाहाङ बेजोड लाग्छन् । प्रेम र तिरस्कारको मझदारबाट गुज्रेको काजी, घर छोडेर मावली राजनीतिको परिबन्दमा परेको बिरकाजी अनि शहरीया ठाँटमा फुर्तिसाथ गाउँ घुसेको बमकाजीसँग प्रेमका खातीर पैंठेजोरीमा बारम्बार हार्ने आशिक प्रेमी, सबै चरित्र र परिस्थितीको मुडमा चुर्लुम्म भिजेका छन्, दयाहाङ । संवाद थोरै तर अनुहार अभिव्यक्ति बढि दिने मैयाँको चरित्रमा रिश्मा गुरुङले सुगन्ध थपेकी छन् । बिके र छन्त्यालको चरित्रमा यसपाली पनि बिजय बराल र बुद्धि तामाङले दर्शक हसाँउने जिम्मा राम्रैसँग पुरा गरेका छन् ।
तर, काजीको प्रेममा बम बनेर फुट्न सकेको छैन बमकाजी । शहरदेखि गाउँ जानु र मैयाँ पाउनका लागि काजीसँग ज्यानकै बाजी लगाएर भिडन्तमा उत्रनुमा बमकाजीका लागि ठूलो तर्क छैन । पटकथा बमकाजीप्रति असहिष्णु लाग्छ । र, सँगसँगै मैयाँ नौलो र अजिब बमकाजीप्रति आशक्ति देखाउनु पछाडी पर्याप्त कारण छोड्न चुकेको छ, फिल्म । केवल सौगातलाई उक्त चरित्रमा देखाएर मात्रै मैयाँको ऊप्रतिको प्रेम आशक्ति र काजीसँगको टसलको सहज अनुमान लगाउन दर्शकलाई बाध्य पारिएको छ । बमकाजीको शहरको विगतले दर्शकमा खासै ऊप्रति सहानुभुती जाग्दैन जति पटकथाले खोजेको छ ।
सहायक चरित्रहरुले यसपटक पूर्ण उपकथा पाएका छन् । पत्निलाई सन्तान सुख दिलाउन नसकेको ‘नामर्द’ छन्त्यालको विवशता, झाँक्रीको बठ्याई, शहरबाट आएकी सुकोमल नायिका निर्जलासँगको बिकेको अपुरो प्रेम जस्ता प्लटहरु ‘कबड्डी कबड्डी’ मा चटनीका रुपमा आएका छन्, ट्वाक्क । काजी र बमकाजीबीचको मुख्य द्वन्द्व जबरजस्त हुन नसक्नुको फाइदा सहायक पात्रले भरपुर उठाएका छन् । जसले गर्दा फिल्मको मध्यभागमा पुगेपछि दर्शकलाई फिल्मको गति केही सुस्त लाग्न सक्छ । काजी र बमकाजीबीच मनोवैज्ञानिक द्वन्द्वमा फितलो बनेको पटकथाले दर्शकमा भौतिक द्वन्द्व ठोसेको छ । अर्गानिक स्वादको ओकालत गर्ने ल्याकत राख्ने ‘कबड्डी कबड्डी’ ले सुत्रबद्ध फिल्मकै शैलीमा सनातन द्वन्द्व दृश्यलाई अँगाल्नुले हजम गर्न केही गाह्रो पर्छ । फाइटलाई पनि कमेडी बनाउने प्रयास फितलो लाग्छ । त्यसैगरी सिक्वेलले ‘कबड्डी’ मा छन्त्याल र बिकेले विदेश जान देखेको सपनाबारेमा सम्बोधन गर्न चुकेको छ । यसपटक दुवै पात्र अस्वभाविक रुपमा त्यसमा मौन बनाइएका छन् ।
« Reply #5 on: February 20, 2016, 05:43:54 AM »